Oktoobar 2018 - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Bisha: October 2018
Bishii Luulyo 11keedii, barayaashii nabadda ee Kolombiya, Rosa Jiménez Ahumada ayaa dhimatay. Rosa waxay nolosheeda u ballanqaadday inay dhisayso adduun caddaalad ah iyada oo loo marayo waxbarashada nabadda, cilmi-baarista, iyo ku-dhaqanka. Ku darsigii Rosa ee barashada nabadda ayaa saameyn caalami ah ku yeelatay. Uruurinta milicsiga waxay ku ammaaneysaa nolosha Rosa iyo dhaxalkeeda. [sii wad akhriska…]
Tababar nabadeed oo ka socda Marooko ayaa dhalinyarada baraya inay noqdaan u doodayaasha nabadda iyo dulqaadka
Youth for Peace, oo fadhigeedu yahay Marooko, ayaa maalgelisa Tababar Nabadeed, kaas oo dhalinyarada baraya inay noqdaan u doodayaasha nabadda iyo dulqaadka. [sii wad akhriska…]
NGO wuxuu kiis ka dhigaa waxbarashada nabada ee Nigeria
Isuduwaha iyo Hogaamiyaha Mashruuca Galaxy4Peace, Precious Ajunwa, ayaa ugu baaqday Dowladda Federaalka iyo daneeyayaasha kale in ay maalgashi badan ku sameeyaan waxbarashada nabada, taas oo ay sheegtay in ay daawo weyn u tahay rabshadaha ka dhaca dhalinyarada dalka. [sii wad akhriska…]
Filim cusub ayaa istaagaya xagjirnimada (Boqortooyada Midowday)
Dugsiga Dagaalka, oo ah filim daandaansi ah oo toddobaadkan la bilaabay, ayaa lagu wadaa inuu ka horyimaado isku dayga dowladda Ingiriiska ee ah inay carruurta ku sasabto taageerada dagaalka. [sii wad akhriska…]
Barashada buugaagta dugsiga ee 22 dal oo Aasiya ah: 'Diirad saarida aqoonsiga qaranimo ee caqabad ku ah'
Warbixinta oo cinwaan looga dhigay 'Dib-u-eegista Dugsiga ee Qarniga 21-aad: Xaaladda Waxbarashada ee Nabadda, Horumarka Waara iyo Jinsiyadda Caalamiga ah ee Aasiya', ayaa lagu bilaabay Hindiya Talaadadii Xarunta Caalamiga ah ee Hindiya ee caasimadda qaranka. [sii wad akhriska…]
Yaraynta halista dagaalka nukliyeerka waxay ka bilaabaneysaa fasalka
“Weligood looma baahnayn waxbarasho ka badan aagagga hub ka dhigista iyo kordhinta… Tan iyo dhammaadkii Dagaalkii Qaboobaa, isbeddelada fikradaha amniga iyo khatarta waxay dalbadeen fikir cusub. Fikirkaan cusub wuxuu ka imaan doonaa kuwa maanta waxbartay iyo kuwa la tababaray. ” - Xoghayihii hore ee Qaramada Midoobay Kofi Annan [sii wad akhriska…]
Aynu Baadhno Fikirkeenna Ku aaddan Nabadda
Maqaalkani waa kii ugu horreeyay ee taxane ah oo sahaminaya Betty Reardon lixdameeyadii sano ee nabadda la baranayay. Halkan Betty waxay ka faallooneysaa ururinta wadajirka ah ee 1968 ee amarka adduunka: "Aan Baadhno Aragtidayada ku aaddan Nabadda: Baaritaan lagu sameeyo Qaar ka mid ah Caqabadaha Siyaasadeed iyo Cilmu-nafsiga ee Nabadda Adduunka." Waxay weydiineysaa akhristayaasha sida khudbadda 1963 ee hub ka dhigista iyo baabi'inta hubka nukliyeerka ee Pope John XIII iyo Madaxweyne John F. Kennedy ay ugu sii jiri karaan barayaasha nabadda maanta. [sii wad akhriska…]
Raadi Saldhigga Guud wuxuu raadiyaa Sarkaalka Mashruuca, Nabadda Waxbarashada ee Dugsiyada Yemen
Sarkaalka Mashruuca ayaa ka hoos shaqeyn doona mashruuca cinwaankiisu yahay "Waxbarashada Nabadda ee Dugsiyada Yemen" oo laga hirgeliyay laba gobol (Lahj iyo Cadan) oo ay maalgelinayso Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Faransiiska. Himilada guud ee barnaamijku waa in la kordhiyo adkeysiga dhalinyarada Yaman ee xagjirnimada rabshadaha wata. [sii wad akhriska…]
Abaalmarintan Nobel waxay soo bandhigeysaa daqiiqad wax la baran karo. In yar baa ka warqabta sida rabshadaha aan loo meel dayin ee haweenka (VAW) ay u yihiin dagaalka iyo iska horimaadyada hubeysan. VAW way sii jiri doontaa inta dagaal jiro. Ka takhalusida VAW kuma saabsana dagaal si uun "badbaado" ama "bani'aadamnimo" ka badan. Yaraynta iyo baabi'inta VAW waxay kuxirantahay baabi'inta dagaalka. [sii wad akhriska…]